मृ’त्युपछि कोरोना पुष्टि भएका कै’दीको ह’त्यापछि अं’ग झि’किएको आ’फन्तको आ’रोप,हेर्नुहोस,अब के होला? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मृ’त्युपछि कोरोना पुष्टि भएका कै’दीको ह’त्यापछि अं’ग झि’किएको आ’फन्तको आ’रोप,हेर्नुहोस,अब के होला?
काठमाडौँ – के’न्द्रीय का’रागारमा जे’ल स’जाय का’टिरहेका कै’दीको गत शनिबार राति भएको मृ’त्युपछि गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ दे’खिएपनि मृ’तकका आफन्तले ह’त्या र अ’ङ्ग झि’किएको आरोप लगाएका छन्।
मृ’तक ६३ वर्षीय रामलखन जैसवालको आँखा झि’किएको र शरिरको विभिन्न भा’गमा चो’ट रहेको उनकी छोरी रश्मी जै’सवाललगायत आ’फन्तले दा’बी गरेका छन्। मंगलबार बिहान उनीहरुले वीर अस्पतालअघि प्र’दर्शन पनि ग’रेका छन्। ‘कोरोना पोजेटिभको रि’पोर्ट देखाएर ह’त्या लु’काउने र अ’ङ्ग झि’क्ने काम भएको छ।
जे’लमा उहाँको ह’त्या भएको हुनुपर्छ। मेरो बुबाको पो’ष्टमार्टम गरियोस्’, रश्मीले सञ्चारकर्मीसँग भनेकी छिन्। उनले मृ’तक जै’सवालको श’वलाई नजिकैबाटै खि’चिएका तस्विर पनि सार्वजनिक गरेकी छिन्।
पा’र्किन्सन र प्रे’सरका वि’रामी जै’सवालको गत शनिबार राति अन्दाजी १० बजे नि’धन भएको थियो। विर अस्पतालका प्रवक्ता वि’द्यानिधि पौडेलले जै’सवाललाई अस्पताल ल्या’इपुर्‍याउनुअघि नै उनको मृ’त्यु भइसकेको र त्यसपछि कोरोना परीक्षण गरिएको बताए। ‘ अस्पताल ल्या’उनुअघि नै उनको मृ’त्यु भइसकेको थियो। त्यसपछि को’रोना परीक्षण ग’र्ने काम भयो।
सोमबार रि’पोर्ट पोजेटिभ आयो। उनको शरिरमा त्यस्तो कुनैपनि चो’ट छैन’, पौडेलले भने। यता के’न्द्रीय का’रागारका जे’लर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले आ’रोपहरु झु’ट्टा भएको दा’वी गरे।
उनले जै’सवाललाई सा’स फे’र्न स’मस्या भएपछि शनिबार राति १० बजे वीर अस्पताल ल’गिएको बताए। जे’लबाट नि’स्कँदा उनी नमस्कार गर्दै वि’दा भएको र शरिरमा कुनैपनि किसिमको चो’ट नदेखिएको हाम्रो सि’सिटिभी फु’टेजमा देखिन्छ’, बास्कोटाको दा’वी छ।
उनले घ’टनाको स’त्यतथ्य बा’हिर ल्याउन छा’नबिन उपयुक्त हुने बताए। ‘ जै’सवाललाई जे’लबाट नि’काल्दासम्म कुनै स’मस्या दे’खिदैन।
यदि छा’नबिनले देखाउँछ भने म ह’दैसम्मको स’जायका लागि त’यार छु’, उनले भने। यता मृ’तककी छोरी रश्मीले यदि जे’लबाट बिना चो’टपटक ल्या’इएको भए कसरी श’रीरमा चो’ट दे’खियो भन्दै जे’लर बास्कोटालाई पो’ष्टमार्टम गर्न लि’खित नि’वेदन दिएकी छिन् ।
‘कोरोना पोजेटिभ दे’खाएर परिवारलाई ला’स हेर्न नदिनै र घ’टना लु’काउने खे’ल भएको छ’, रश्मीको आ’रोप छ। क’र्तव्य ज्या’न मु’द्धामा ज’न्मकैद स’जाय भो’गिरहेका रुपन्देहीको सि’द्धार्थ नगरपालिकाका जै’सवाल जे’ल बस्न था’लेको ७ वर्ष भएको थियो।
Previous वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको आँखा नि’कालेको अ’फवाह भन्छ अस्पताल तर जनताले प’त्याएनन!